တရုတ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းက ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
အာဒစ်အာဘာဘာ ၊ ဇွန် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းက အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် Sinopharm COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများသည် ဇွန် ၁၉ ရက်၌ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် အာဒစ်အာဘာဘာမြို့သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ ကိုယ်စား တရုတ်နိုင်ငံ သံရုံးက အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း အား ယခုအကြိမ်ရောက်ရှိလာသည့် ကာကွယ်ဆေးများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Dereje Duguma က ကာကွယ်ဆေးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား၌ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူများက COVID-19 ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ အပေါ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုအသီးသီးအပေါ် ကျေးဇူးတင်လိုကြောင်း ၊ ယခုအကြိမ် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် ကာကွယ်ဆေးများအနက် အချို့သောကာကွယ်ဆေးများကို တိုက်ပွဲများ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေသည့် Tigray ဒေသအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် အာဒစ်အာဘာဘာမြို့တွင် ဇွန် ၁၉ ရက်၌ ဝန်ထမ်းများက တရုတ်နိုင်ငံ မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ သယ်ယူနေကြစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ Abera Tola က အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးသော ပြည်သူများအတွက် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် အာဒစ်အာဘာဘာမြို့တွင် ဇွန် ၁၉ ရက်၌ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်က တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးများရှေ့တွင် စုပေါင်းအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ကျောက်ကျိယွမ် က အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ နှင့် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေးတည်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်၍လည်း အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် လူမှုဘဝ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ဇွန် ၁၈ ရက်ညပိုင်းအချိန်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စာရင်းပြုစုချက်အရ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၂၇၄,၈၉၉ ဦးရှိခဲ့ပြီး ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၄,၂၇၆ ဦးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (Xinhua)
1. 6月19日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，工作人员清点中方援助的新冠疫苗。 新华社记者 汪平 摄
2. 6月19日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，工作人员运输中方援助的新冠疫苗。新华社记者 汪平 摄
3. 6月19日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，中埃双方代表在中方援助的新冠疫苗前合影。 新华社记者 汪平 摄